Waxa la sheegay dadkii ka baro kacay alemaata in aan gargaar binia’adamnimo ku filan aan la gaaadhsiinin – ዜና ከምንጩ
Waxa la sheegay dadkii ka baro kacay alemaata in aan gargaar binia’adamnimo ku filan aan la gaaadhsiinin
Dadkii ka baro kacay raaya alemaata ee ku jiray xeroda qobo ee ku barakacay dagaaladi ay ku qadeen kooxda tplf ayaa sheegay in aan baryahan wax gaargaar binia’admnimo ah aanay helin.
Waxa malmo ka hor magalada alemata qabsaday kadib markii ay ka baxeen cidanka iyo booliska gaarka ee deegaanka amxaarada kooxda tplf.dadkii halkaasi ku sugna ayaa isbadalka kadiska ah awgeed u baqday naftooda kadibna u qaxay magaalada u dhaw ee qobo.
Wargayska addis maleda oo la hadlay baro kacayaashasi ku sugan xerada qobo ayaa sheegay in dhinca dawlada aan wax gargaar ah aanay ka helin.
Xiligan xaadirka ahna amni darada ka jirta halkaasi awgeed in aanay ku noqon Karin meelihi ay daganaayeen barokacayaashu,sido kale kaalmada bini a’adamnimo kasakow ay ka walaacsanyihiin nabadgalyo la’aanta halkaasi ka jirta sida ay sheegeen.
Waxa aanay ka codsadeen dawlada deegaankaasi iyo federaalkaba in nabadgalyada loo soo celiyo oo xal waara oo nabada ku saabsana loo sameeyo.waxa kale oo barokacayaashu ay sheegeen in si nabadi hore ee melaha ay daganaayeen ka jirtay loo so celiyo waxa loo bahan yahay in fiiro gaar ah la siiyo oo laga shaqeeyo.
Waxa kale oo ay sheegeen in xiligan xaadirka ah xeerada ay ku jiraan ee qobo aanay ka helin gargaar binia’adamnimo.markii ay ka soo qaxeen meelihi ay daganaayeenna madaama ay si kadiso ah uga soo baxeen anay sidan xata wax dhar ah oo ay xidhaan iyo wax ay cunaan toona.
Markii aan halkaasi soo gaadhnay bay yidhaahdeen, in kasta oo ay dawladu noo keentay waxooga cunto ah iyo taanbuugyo hadana maaha wax noogu filan gargaarka binia’adamnimo.
Wargayska adiis maledana asaga oo kaashanaya cabashada barokacayaashasi ayaa waxa u fursad u yeeshay in u waraysto duqa magaladaasi Kaasa Radha.
Waxana u sheegay duqa magaaladu in cabashada baro kacayaashu ay tahay mid saxsan oo aanay heliin gargaarki binia’adamnimo ee ay u baahnaayeen.
Waxa kale oo u yidhi hase ahaate barakacayaasha ku jira xeerooyinka kala duwaan wax la isku dayaya in la gaadhsiiyo gargaarka binia’adnimo inta la awoodaayo.
In kasta oo u sheegay hadii barokacayaasha lagu celin laha meelihi ay ka soo barokaceen in ay uga baqayaan amnigooda, hadan madaama imika ay dawladu ay qabsatay meelahaasi walaac sidaasi ah ma qabno bu yidhi.
Waxa u intaasi raaciyay booliska gaarka ah ee amxaarada iyo kooxo kale oo ka tirsan amniga oo is kaashanaya in ay alemaata iyo agagaarkeedaba qabsadeen.waxa aanan ku hawlanahay sidi aan magaaladoodi ugu celin lahayn inta aan isku habayno .
Waxa kale oo u xusay duqa magaladu in kasta oo aan la gaadhsiin gargaar ku filan barokacayaasha ku sugan qobo,hadan madaama ay dawladu gacanta ku dhigtay magalada alemaata in ay ka muuqato barokacayaashasi daganaansho iyo farxad.
Marka horeba bu yidhi su’aasha barakacayaashasi waxa ay ahayd cidanka iyo booliska gaarka ah ha noo soogalaan magaladayada, balse may ahayn raashin iyo biyo.
Waxa kale oo u ku muujiyay xalada magaaladaasi in ay ka muuqato sida ay sheegayso xogta maamulka magalada ay ka heleen inay ka muuqato xasilooni.
Maareeyaha xidhiidhka bulshada ee xafiiska ka hor taga masiibooyinka qaran oo u waramay wargayska addis maleda ayaa sheegay in ay caqabad ku noqotay in ay gaadhsiiyaan barokacayaasha gargaar binia’adamnimo,madaama qalalaasihi halkaasi ka jiray ee ay sameeyeen kooxda tplf ay wadooyinku xidhmeen.
Waxa kale oo u yidhi sababahaas iyo sababo la xidhiidha awgeed ayaanu gargaar binia’admnimo u gaadhsiin kari waynay,imika se waxa aan la kaashan doona xafiiska ka hor taga masiibooyinka ee magalada waxa aanan qorshayn doona sidi xal loogu samayn lahaa barokacayaasha.
Ayada oo laga duulaayo heeshiski xabad joojinta ee ka soo yeedhay feederaalka,waxa xusid mudan in booliska gaarka ah ee deegaanka axmaarada u yidhi weerarki badheedhka ahaa ee ay igu soo qaaden kooxda tplf waan iska difaacay.
Waxa war bixintiisa u soo saaray ku sheegay xafiiska arimaha xidhiihdka dawlada ee deegaanka axmaarada in tplf oo looga baahna in ay ka tacliin qaataan khaladaad koodi hore oo ay shacabka ka ilaaliyaan dhibaatooyinka,balse ay meelo ka mid ah deegaanka axmaarada ay ku soo qaaden weerar.
Ugu danbayntiina waxa u yidhi in kasta oo minishiyad iyo booliska gaarka ah ee deegaanku ay iska difaacayeen weerarki ay ku soo qaaden tplf,hadana dulqaadka xad dhaafka ah u keeni karo dhibaato aan laga soo kabmi Karin ,sidaas darteedna la bilaabay in si toos ah loola dagaalamo kooxdaasi.
Total views : 5877144